Col. Cabdullahi Yuusuf oo loo diiday fiisaha dalka Mareykanka si uu uga qeyb galo kulan madaxeedka Qaramada Midoobay
Buluugleey August 18, 2005
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu gacan seeyrtay in ay siiso Col. C/laahi Yuusuf Axmed Viisaha ama dalku galka Mareykanka si uu uga qeybgalo Shirweynaha iyo xafladaha 60 guurada ka soo wareegatay dhismaha hay’adda Jimciyada qurumaha ka dhaxeysa.
Xukuumadda Washington oo diyaar garow weyn ugu jirta marti gelinta madaxda caalamka ee ka soo qeyb galaya xafladda xuska 60 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay Q.M sanadkii 1945 kii, waxaana xuskaas si rasmi ah loogu dabaaldegaa Oktoobar 24 ka sannad kasta, ayaa cadeysay in aaney suurtogal aheyn in madaxweynaha Soomaaliya uu ka qeybgalo xafladdaha loogu dabaaldagayo aas aaska Qaramada Midoobey oo lagu wado in ay ka dhacdo magaalada New York bartamaha bisha September ee fooda inagu soo heysa.
Ilo diblomaadsiyadeed oo Soomaali ah oo ku sugan Qaramada Midoobey ayaa waxa ay sheegeen in safaaradda Mareykanka ee Nairobi ay ku gacan seyrtay in ay siiso Col. Cabdullahi Yusuf fiisaha lagu galo dalka Mareykanka, iyadoo aan la cadeyn sababta ka dambeysa diidmadaasi.
Warka ayaa waxa uu intaasi ku darayaa in safiirka Soomaliya u fadhiya Qaramada Midoobay uu codsaday in uu la kulmo xoghayaha guud ee Q.M. Kofi Anan si uu ugu booriyo in uu faragaliyo diidmada xukuumadda Mareykanka ee ku aadan is hortaagida fiiso in la siiyo Col.C/laahi Yuusuf si uu uga qeybgalo xafladda ay isugu imaanayaan madaxweyneyaasha caalamka.
Col. C/laahi Yuusuf ayaa arbacadii todobaadkii hore waxa uu qoraal uu ku dalbnanayo fiisaha Mareykanka u diray safaarada Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyadoo dalabkaasina ay ku gacan seyrtay safaaradda Mareykanka.
War ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in sharciyada Mareykanka iyo brotokoolka ka yaal Qaramada Midoobay ay yihiin kuwo ismaandhaafsan oo aan arrintaasi khuseyn sida ay qortay shabakada wararka oo laga leeyahay dalka Jordan (Urdun).